याकूब ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
५ अब हे धनी मानिसहरू हो, रोओ; आफूमाथि आउँदै गरेको सङ्कष्टको कारण डाँको छोडेर रोओ। २ तिमीहरूका धनसम्पत्ति सडेका छन्‌ अनि तिमीहरूका लुगाहरू कीराले खाएका छन्‌। ३ तिमीहरूको सुन र चाँदीमा कस लागेको छ अनि त्यही कसले तिमीहरूविरुद्ध साक्षी दिनेछ र तिमीहरूको मासु खानेछ। तिमीहरूले अन्तको दिनको लागि आगो जम्मा गरेका छौ। ४ हेर, तिमीहरूको खेतमा कटनी गर्ने खेतालाहरूले पाउनुपर्ने जुन ज्याला तिमीहरूले नदिई बाँकी राखेका छौ, त्यो कराइरहेको छ अनि बाली काट्नेहरूको गुहार सेनाहरूका यहोवाको कानमा पुगेको छ। ५ तिमीहरूले पृथ्वीमा विलासी जीवन बिताएका छौ अनि शरीरका अभिलाषाहरू पूरा गर्नतिर लागेका छौ। तिमीहरू काट्नुअघि बेस्सरी खुवाएर मोटो पारिएका पशुहरूजस्तै भएका छौ। ६ तिमीहरूले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने त्यस मानिसलाई दोषी ठहराएका छौ र हत्या गरेका छौ। के कसैले तिम्रो विरोध गरेन? ७ त्यसकारण, हे भाइहरू हो, प्रभुको उपस्थिति नभएसम्म धैर्य गर। हेर, एक जना किसानले भूमिको बहुमूल्य उब्जनी पाउनको लागि पर्खेर बस्छ अनि अगिल्लो वर्षा र पछिल्लो वर्षा नहोउन्जेल धैर्य गर्छ। ८ तिमीहरू पनि धैर्य गर; आफ्नो मन स्थिर बनाओ, किनकि प्रभुको उपस्थिति हुनै लागेको छ। ९ हे भाइहरू हो, एक-अर्काविरुद्ध गनगन नगर, ताकि तिमीहरूको न्याय नगरियोस्। हेर, न्यायाधीश ढोकैमा उभिरहनुभएको छ। १० भाइहरू हो, यहोवाको नाममा बोल्ने भविष्यवक्ताहरूले भोगेको कष्ट र उनीहरूले देखाएको धैर्यलाई नमुनाको रूपमा लेओ। ११ हेर, सहनशील मानिसहरू आनन्दित हुन्‌ भनी हामी भन्छौं। तिमीहरूले अय्यूबको सहनशीलताको विषयमा त सुनेकै छौ अनि यहोवाले दिनुभएको इनाम पनि देखेकै छौ, कि यहोवा कस्तो कोमल स्नेहले भरिपूर्ण अनि कृपालु हुनुहुँदो रहेछ। १२ विशेष गरी, हे मेरा भाइहरू हो, कसम खान छोड। हो, तिमीहरूले न स्वर्गको न पृथ्वीको न त अरू कुनै कुराको नाममै कसम खाओ। तर तिमीहरूको ‘हुन्छ’ चाहिं ‘हुन्छ’ अनि ‘हुँदैन’ चाहिं ‘हुँदैन’ नै होस्, ताकि तिमीहरूको न्याय नगरियोस्। १३ के तिमीहरूमध्ये कसैले कष्ट भोगिरहेको छ? उसले प्रार्थना गरिरहोस्। के कसैको मन खुसी छ? उसले भजन गाओस्। १४ के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी* छ? उसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई* आफूकहाँ बोलाओस् अनि तिनीहरूले उसको लागि प्रार्थना गरिदेऊन्‌ र यहोवाको नाममा तेल घसिदेऊन्‌।* १५ अनि विश्वाससहित गरिएको प्रार्थनाले त्यस बिरामी मानिसलाई निको पार्नेछ र यहोवाले उसलाई उठाउनुहुनेछ। उसले पाप गरेकै रहेछ भने पनि उसलाई क्षमा दिइनेछ। १६ त्यसकारण, एक-अर्कासामु आफ्ना पापहरू खुलमखुला स्वीकार अनि एक-अर्काका लागि प्रार्थना गर, ताकि तिमीहरू निको होओ। परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसको उत्कट बिन्तीले ठूलो काम गर्न सक्छ। १७ एलिया हामीजस्तै मानिस नै थिए तैपनि तिनले पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्दा त्यस देशमा साढे तीन वर्षसम्म पानी परेन। १८ तिनले फेरि प्रार्थना गर्दा आकाशबाट पानी पऱ्यो र जमिनले आफ्नो उब्जनी दियो। १९ हे मेरा भाइहरू हो, यदि तिमीहरूमध्ये कोही सत्यको मार्गबाट तर्केर गयो र कसैले उसलाई फर्काएर ल्यायो भने २० तिमीहरूलाई यो थाह होस्, कि जसले एक जना पापीलाई गलत मार्गबाट फर्काएर ल्याउँछ, त्यसले उसको जीवनलाई* मृत्युबाट बचाउनेछ र उसका असङ्ख्य पापहरू ढाक्नेछ।
^ या ५:१४ * स्पष्ट छ, यसले परमेश्वरसितको सम्बन्ध कमजोर हुनुलाई बुझाउँछ।
^ या ५:१४ * प्रेषित ११:३० को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ या ५:१४ * स्पष्ट छ, यसले परमेश्वरको वचनको प्रयोगलाई बुझाउँछ।
^ या ५:२० * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।